7da codsi ee ugufiican ee badala midabka timaha waqtiga dhabta ah 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
App beddelaya midabka timaha wuxuu faa'iido u yeelan karaa labadaba madadaalo iyo nacasnimada asxaabtaada iyo inuu kaa caawiyo inaad go'aansato nooca hooska aad ku rinjiyeyn karto Barnaamijyadani waxay kuu oggolaanayaan inaad isku daydo muuqaal cusub ka hor intaadan aadin saloon, inta badan waaqici ahaan. Sidaa darteed, waxaa jira khatar yar oo ah qoomamo dambe.
1. Midabka timaha
Timaha Midabku waxay bixiyaan qaabab kala duwan oo midabaynta, sida saddexlaab, mugdi ah, koray ama timaha oo dhan. Markaad furaysid arjiga, isticmaaluhu wuxuu wajahayaa sawirka kamaradda, laakiin sidoo kale waa suurtogal in sawir laga isticmaalo taleefanka gacanta. Kaliya dooro midabada hoose shaashadda.
Waxaa jira ikhtiyaarro geesinimo leh, sida midabada cagaaran, guduudka, buluuga ah iyo kuwa ugu caansan, sida timo cad, bunni iyo casaan. Codsiga sidoo kale wuxuu kuu ogolaanayaa inaad kala qaybiso shaashadda si aad isbarbar dhigto sawirada waqtiga dhabta ah. In kasta oo aanad dareen lahayn, kaliya taabashada shaashadda si aad sawir u qaadatid ama u taabatid oo aad u xajisid duubista fiidiyowga.
Midabka timaha (bilaash, oo wax ku iibsashada abka ah): Android | macruufka
Soo ogow sida aad ugu eegi lahayd midab timo cusub waqtiga dhabta ah
Fabby Look waa barnaamij tijaabo ah oo Google loo abuuray oo si gaar ah loogu beddelayo midabka timaha. Codsiga codka wuxuu ku yimaadaa waqtiga dhabta ah. Kaliya taabo furaha oo daawo isbedelka waqtiga. Waxaa jira xulashooyinka caadiga ah, sida timo cad, casaan, bunni iyo cawl, xitaa kuwa yar yar ee caadiga ah, sida buluug, casaan, oranji, iwm.
Haddii aad jeceshahay natiijada, waxaad ka qaadi kartaa sawir, afaafka hore ee shaashadda, oo si fudud ugula wadaagi kartaa Facebook, Instagram, Snapchat, iyo kuwo kale. Barnaamijku ma laha waxqabadyo isku dhafan, laakiin sidoo kale ma laha qalabayn ama wax ka beddelid.
Fabby fiiri (bilaash): Android | macruufka
Instagram ma aha codsi gaar ah oo lagu beddelayo midabka timaha, laakiin waxay leedahay miirayaal dhowr ah oo kuu oggolaanaya inaad ku dhajiso midab cusub waqtiga dhabta ah. Si tan loo sameeyo, si fudud u tag Sheekooyinka, ka rog baararka saamaynta midig ilaa bidix, dhammaan jidka ilaa dhamaadka. Kadib waxaad arki doontaa ikhtiyaarka Raadinta Raadinta, inaad taabato.
Shaashadda u muuqata, tag aaladda muraayadda weyneysa, oo ku taal xagga sare shaashadda midigta. Goobta raadinta, ku qor ereyo sida timo midab leh o midabka timaha oo waxaad arki doontaa dhowr ikhtiyaarro kala-soocid ah oo bixiya shaqooyin.
Ciyaar dee-ga aad jeceshahay ka dibna Si aad ula kulanto. Waxaa lagaa qaadi doonaa shaashadda daabacaadda Sheekooyinka, halkaas oo aad ka qaadi karto sawirro oo aad ku duubi karto fiidiyowyo, sida aad ugu sameyso shaandheeye kasta oo kale.
Hagaha Shaandhooyinka Qarsoon iyo Saamaynta Sheekooyinka Instagram - Eeg Sida loo Helo wuxuu si faahfaahsan u sharaxayaa casharrada.
Instagram (bilaash): Android | macruufka
4. Dhar timo
K-POP jilitaanka timaha
Timaha dharka waxaa ku dhiirrigeliya timaha farshaxan-yahanka K-Pop ee muusigga ka soo jeeda Kuuriyada Koonfureed Codsiga ayaa kuu oggolaanaya tag sawir laga qaado Gallery ama isla goobta ku qaad. Isticmaaluhu waa inuu marka hore doortaa goynta timaha ka dibna sii wadaa tincture in la beddelo garoonka.
Waxaa jira daraasiin ikhtiyaarro midab ah oo la heli karo, oo ay ku jiraan kuwa casriga ah sida lilac, pink, purple, iyo green. Labada timo iyo midabba waa la hagaajin karaa si ay u ekaadaan sida dabiiciga ah intii suurtagal ah.
Dharka timaha (bilaash): Android
5. Qurxinta YouCam
In kasta oo diiradda la saarayo saameynta qurxinta, YouCam Makeup waxay leedahay muuqaal horumarsan oo lagu beddelayo midabka timaha waqtiga dhabta ah. Isticmaaluhu wuxuu isku dayi karaa qaabab laba-midab leh, wuxuu u dhigmaa hadhkiisa dhabta ah, ama wuxuu dalban karaa hal hadh oo keliya.
Waa suurtagal in la hagaajiyo xoogga, iftiinka, iyo sidoo kale daboolida midabka ama intee le'eg oo la isku qasin karo codkeeda asalka ah. Haddii aad jeceshahay natiijada, dalabku wuxuu kuu oggolaanayaa kaliya inaad sawir qaadatid, laakiin sidoo kale inaad ku duubto fiidiyowyada shaandhada.
Qurxinta YouCam (bilaash, oo wax ku iibsashada abka ah): Android | macruufka
6. Timo dheeh
Midabka Timaha Midabku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad sawir ku qaadatid isla goobta ama aad ku isticmaasho mid maktabadda laga heli karo. Kadib, isticmaaluhu waa inuu doortaa, sawirka, aagga timaha ka dibna uu taabto codka uu doonayo inuu dalbado. Waxaad dooran kartaa hal midab si aad u rinjiso wax kasta oo aad ugu darto kuwa kale dhawr xargo oo keliya.
Haddii aad rabto, xitaa waxaad abuuri kartaa midabkaaga adoo isticmaalaya ikhtiyaarka Midab ku dar. Natiijada waa lagu keydin karaa taleefanka ama waxaa lagu wadaagi karaa codsiyada kale.
Timaha midabka (bilaash ah, oo lagu iibsado app-ka): macruufka
7. Midab beddelaha timaha
Beddelka Midabka Timaha ayaa leh soo jeedin aad ugu eg Timaha Midabka Timaha ee Android. Codsigu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad isticmaasho sawirrada Gallery ama aad isla goobta ku qaadatid. Ka dib uun taabo midabka la rabo oo farta ku mari aagga timaha. Waa suurtagal in lagu dhajiyo dhowr tones sawir isku mid ah iyo xitaa midab waxyaabo kale oo sawirka ah.
Sidoo kale, isticmaaluhu wuu beddeli karaa xoogga midabka, taasoo ka dhigaysa saamaynta mid macquul ah. Codsiga wuxuu bixiyaa xulashooyin si loogu wadaago natiijada shabakadaha bulshada ama loogu keydiyo qalabka. Waxaa lagu weydiin karaa inaad siiso shan xiddigood. Maaha inaad tan sameyso si aad uhesho ilaha.
Midab bedelka timaha (bilaash): Android
SeoGranada waxay kugula talineysaa:
Timaha ugu fiican iyo jilidayaasha midabka si ay u beddelaan muuqaalka
Codsigu wuxuu beddelaa jinsigaaga oo wuxuu kaa dhigayaa lab ama dheddig; arag sida loo isticmaalo
Codsiyada ka caawin doona qurxinta
8-da barnaamij ee kamaradaha ugu fiican ee Windows, macOS, iyo Linux
Sida loo ogaado haddii ciyaartu ka socoto kombuyutarkayga
Sida sawir loogu muujiyo taleefanka iyo kombiyuutarka
8 barnaamijyada ugufiican ee lagu mariyo kombuyuutarka
6 barnaamijyada cimilada ah si hawadu kuugu qabato adiga oo aan ilaalin
8 barnaamijyo si loogu abuuro kombuyuutar xitaa adiga oo aan ogeyn sida barnaamij loo sameeyo
10 daawadayaasha sawirada ugufiican si aad ubadasho barnaamijka Windows
Xaqiiq ama warar been abuur ah: sida loo ogaado haddii warku been yahay ama run yahay
Sida loogu dhejiyo Sawirada iyo Fiidiyowyada Sheekooyinka Instagram-ka kombuyuutarka sannadka 2020
Keyboard aan la qaabeyn - sida loo xaliyo loona xaliyo dhibaatada